Emafleshikhadi iyithuluzi elingeyona inkimbinkimbi futhi angabacwasi okuthembekile esetshenziswa namuhla njengoba othwala ulwazi kusuka cishe noma kuphi. Ilula futhi amancane ngosayizi, flash card in the last eminyakeni embalwa umzuzile ukuthandwa yasakazwa kanye babé yinto ngemfanelo ezibalulekile abantu yesimanje. Nokho, ngeshwa, ngisho inqubo linesizotha kungaba okwamanje esibi behluleka. Indlela yokulungisa induku kulesi simo, futhi kuphi ukuqala?
Okokuqala, kufanele acacise ngezimo ezaholela ukuhluleka kwawo. Mhlawumbe flash drive kwehla kusuka ukuphakama enkulu noma yawela emanzini? Mhlawumbe othile wafaka ngephutha into esindayo ke? Kuyaqondakala ukuthi ukwehluleka elekthronikhi Impahla akubalwa zisebenzisa imithelela ngokomzimba. umusi Zezıhlabane kanye nomswakama nazo yingozi electronics, efana amagalelo ngokomzimba. Kungenxa yalesi sizathu, kufanele ugcine le divayisi kude lokushisa ukweqisa kanye kude elangeni.
Njengomthetho, buyamangalisa inkinga lapho idivayisi ixhuma PC noma laptop. Uma emafleshikhadi inendaba ebalulekile ukuthi nalo muntu ebuza indlela yokulungisa induku bese kuwo yonke idatha. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona ngokwehluleka kudivayisi:
Ikhompyutha akaboni idivayisi jikelele.
Ikhompyutha ubona idivayisi, kodwa awukwazi ukufunda ulwazi kuwo.
Kungakhathaliseki uhlobo ukwehluleka, kufanele kuqala kunazo zonke ukuqinisekisa ukuthi inkinga flash drive amanga ngqo, ngoba ngezinye izikhathi kungase kwenzeke ukuthi ayisebenzi-USB port, isandiso, noma umshayeli yesistimu yokusebenza landizela Plug and Play uhlelo. Ngemuva ekuqinisekiseni ukuthi ukwehluleka amanga ngokungenaphutha idrayivu, uqhubeke ukulungisa induku.
Ngakho, lokho kungaba yinkinga futhi udinga ukwazi ukuze ulungise induku.
1. A okungahleliwe edatha enkampani yenethiwekhi ukususwa. Akukho lutho olubi lapho, ngoba nge applets elula Recuva ungalulama cishe yonke idatha yerekhodi zokugcina.
2. USB flash drive akafuni ukuba simiswe. Le nkinga futhi fixable, ngoba lapha sifika uhlelo losizo «Panasonic_SD Formatter.2000», okuyinto ukuphoqelela format abezindaba, ngemva kwalokho-ke sizokwazi ukusebenzisa okunye.
3. Indlela yokulungisa drive flash uma akawuvuli? Lapha ukuza izinhlelo zosizo izikhombi ezifana ChipGenius futhi CheckUDisk, lapho ufuna ukubuyisela "umbono" yesistimu yakho flash abezindaba.
4. Uma konke okunye yehluleka, kukhona enye indlela "avuselele" induku ngenjongo ukusetshenziswa kwaso phambili, kodwa indlela wesibili, ngemva kwalokho-ke kuyofakazela umsebenzi noma ngeke uvule. Kuyadingeka ukuba asuse umzimba kanye oxhumana inaliti encane korotnut, ngoba kungakusiza ngempela, futhi idrayivu ungaqala ukusebenza. Uma ngale ndlela yehlulekile ukulungisa USB flash drive, kubalulekile ukuba ayiyeke le umqondo lisetshenziswa esizayo.
Efingqa, kumele kugcizelelwe waphinda ukuthi, naphezu baphikisana kakhulu ukuba shaking induku uthuthumele ezincane, i wesifunda electronic okungukuthi ngaphakathi kuye, noma ngasiphi isikhathi wehluleka. Ukuze lokhu kumelwe sikulungele njalo futhi sizame hhayi ukugcina ukwaziswa okubalulekile mayelana abezindaba isikhathi eside. Ngemva ekuqaleni flash drive ibekwe hhayi ukugcina ulwazi futhi ulithumele komunye idivayisi digital komunye. Manje sesiyazi indlela yokulungisa USB flash drive futhi yilokho kanye okudingekayo. Siyethemba ukuthi asazi nobuso izinkinga ezifanayo, bese zonke imishini yethu izosebenza kahle nangokunembile. Kodwa ngisho uma kwenzeka iloli, khumbula ukuthi ezimweni eziningi yonke imininingwane kwi drive ukuze aphinde.